Zvigadzirwa Vatengesi uye Fekitori | China Zvigadzirwa Vagadziri
Runhare: +86 18041030986
[Kopa] Ceramic hasha bhandi
Ceramic hasha bhandi
Brown akabatanidza alumina bhandi
Kushungurudzika kwepakati vhiri
Potassium fluoborate ikirin'i poda chena. Zvishoma zvinosungunuka mumvura, ethanol uye ether, asi isina insoluble mune alkaline mhinduro. Kuwanda kwehukama (d20) ndeye 2.498. Nzvimbo yakanyunguduka: 530℃ (kuora)
Parizvino, Yousheng akaisawo mari simba idzva mukugadzirwa kwemicheka yeindasitiri. Kuti uvandudze mhando yechigadzirwa, ichangobva kudyara mari mukutenderera nekuridza-kumagumo kutenderera michina. Iyo kambani's zvinotungamira zvigadzirwa vane akati wandei akateedzana: ese-ekotoni machira machira, ese-polyester machira eindasitiri, polyester-donje maindasitiri machira, nezvimwe. Zvigadzirwa zvikuru zvinonyanya kukodzera emery machira kumashure base.
Chakaita zvokugadzirwa cryolite
Cryolite ndeye crystalline chena upfu. Zvishoma zvinonyungudika mumvura, zvine huwandu hwe 2.95-3.0, uye nzvimbo inonyungudika ingangoita 1000 ° C. Izvo zviri nyore kutora mwando uye zvinogona kuora neakasimba acids senge sulfuric acid uye hydrochloric acid kuti iite inoenderana aluminium uye sodium munyu.
Zirconium corundum inonyungudika patembiricha yakakwira mumoto wemagetsi arc ine zircon jecha seyakanyanya mbishi zvinhu Iyo ine yakaoma magadzirirwo, compact dhizaini, yakakwira simba uye yakanaka kupisa kwemafuta. Sehasha, inogona kugadzira mavhiri anorema-kuita-anorema ekugeda mavhiri, ayo ane kukuya kwakanaka pazvinhu zvesimbi, castings dzesimbi, simbi dzinodziya, uye akasiyana chiwanikwa zvinhu; uyezve, zirconium corundum iri zvakare inogadziriswa mbishi zvinhu. Icho chinhu chakanakira chepamusoro-chekuita chinotsvedza cheya mabhureki uye kunyudza inova. Inogona zvakare kushandiswa kugadzira zirconium corundum zvidhinha zvegirazi rinonyungudika mavira.
[Kopa] Zirconia Alumina
Zvedongo hasha chakagadzirwa inokosha alumina sezvo huru zvinhu, hwakakanyiwa zvakasiyana-siyana isingawanzowanikwi pasi dzakachinjwa zvinoriumba, uye sintered panguva yakakwirira tembiricha. Iine kuomarara kwakanyanya uye kuzvirodza. Yousheng anotsamira pane yakasarudzika pfungwa yekukuya uye inowedzera yakakosha kemikari kugadzira zvedongo hasha nehunhu hwekutonhora kutonhora. Zvedongo hasha inogona kuchengetedza inogara-inogara kukuya simba, kuitira kuti akagadzirwa hasha maturusi anogona kusvika kune yekupedzisira-yakareba hupenyu. Iyo hasha ine yakakura kwazvo yekushandisa renji, iyo inogona kushandiswa kukanda nekukuya pasi pekumanikidza kwakanyanya, uye nekugaya kwakanaka kwezvinhu zvakasiyana siyana, zvinosanganisira giya kukuya, kutakura kukuya, crankshaft kukuya nevamwe.
Zvigadzirwa zvemuchina: mhando nyowani tekinoroji, yakanaka yekuzvirodza, yakapinza kukuya, yakanyanya tembiricha kusagadzikana, kukwirira kuomarara, kukwirira kushanda uye hazvisi nyore kupfeka, yunifomu madhaimani uye jecha, wakanaka basa, kuchengetedzeka uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kutsemura incision pasina kutsemuka uye zvimwe zvakanaka. .
Zvigadzirwa zvinonyanya kukodzera kune: ese marudzi esimbi uye asiri-esimbi zvinhu, kukuya tungsten simbi, azvikuya vanocheka, alloys, madhaimani, girazi, ceramics, semiconductor zvinhu (silicon carbide, nezvimwewo), magineti zvinhu (magineti cores, rinobva machira, ferrites, nezvimwewo) uye brittle simbi zvinhu (zvakaoma chiwanikwa, tungsten simbi YG8, nezvimwewo)
[Kopa] Brazed diamond ichikuya vhiri
Yakakwirira-mhando alumina abrasives uye nebwe abrasives vanopisa chakatsindirwa.
Zvigadzirwa zvechigadzirwa: chengetedzo yechigadzirwa, kugona kwakanyanya, kunyatsoita basa, kuwedzera kusakara, kugadzikana uye kusimba, ine maficha ekudzivirira kwakasimba, kusagadzikana kwekukanganisa, kupfugama kupokana, kukuya kukurumidza kumhanya, kukuya kwakatsiga, hupenyu hurefu hwebasa, nezvimwe.
Chigadzirwa chinonyanya kushandiswa: kukuya, kubvisa ngura, kupukuta, kukuya simbi, kugaya musono kukuya, kupisa simbi chamfering, uye pamusoro penzvimbo.
Dhaimondi uye resin bond zvakapisa zvakatsikirirwa kuita chigadzirwa.
Brazed diamond yekugeda vhiri
Mundima yehunyanzvi hwekukorobha, Yousheng anovandudza madhizaizi matsva ekupukuta, anosanganisira sandpaper uye velvet muviri, uye iwo maviri akasungwa uye akasanganiswa. Iyo Velcro tepi pane tireyi inosungirirwa nemutumbi wemvere, izvo zviri nyore kuunganidza uye kushandisa. Zvichienzaniswa neyakajairika polishing chigadzirwa, chinonyanya kuzivikanwa chejecha dhisiki ndechekuti inogona kutora guruva nehupfu inogadzirwa mukugadzirisa maitiro munguva, kugadzirisa kugadzirisa kunyatsoita, uye kudzora guruva nehupfu kubhururuka. Kunze kwezvo, ine yakanaka nharaunda chengetedzo. Zvese izvi maficha anogona kunyatso kugadzirisa anoshanda nharaunda.
Brown corundum, calcined corundum, uye zirconium corundum louvre zvigadzirwa:
Brown corundum, calcined corundum, uye zirconium corundum louvres zvinoshandurana nemavhiri akafanana nemavhiri ekugaya. Ivo vane kusimba kwakasimba, kukwirira kwekumanikidza, kukombama kushora, kuzvirodza kwakanaka, yakakwira kukuya chiyero, uye ruzha rwakaderera. Inokodzera kukwenenzvera uye kupukuta kwesimbi, simbi, simbi isina simbi, simbi yakakanda, aruminiyamu, huni, plastiki nezvimwe zvisiri zvesimbi.
Zvakatipoteredza-zvine hushamwari zvinoumba jecha disc 28 mhando:
Iyo yakasarudzika-inoshamwaridzika inoumbwa nesanding disc 28 inogadzirwa neakasarudzika emery jira rakasungirirwa pane yakasikwa-inoshamwaridzika substrate. Iyo inharaunda-inoshamwaridzika SG (super green) hasha disc inoratidzirwa nekuchengetedza kwakanyanya uye kwakanaka kuchinjika; jira reEmery uye substrate zvese zvine hushamwari nharaunda. Mashoko acho anoshandiswa kupuruzira mabhuru emoto uye nzvimbo dzepende dzezvikepe, mota pamwe nendege.